Xaflad lagu soo dhaweynayay doorashada guddoonka Baarlamaanka iyo musharraxnimada Shiikh Shariif oo Sweden lagu qabtay
Katarineholm Axad 9 September 2012 SMC
Waxaa magaalada Katrineholm ee dalka Sweden lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay doorashada hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya iyo musharraxnimada Shiikh Shariif Shiikh Axmed, iyadoo ay munaasabadda ahayd mid si weyn loo soo agaasimay.
Dad aad u faro badan oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo Sweden ka tirsan iyo dalal Sweden la deris ah ayaa munaasabadda si weyn u soo camiray, kuwaasi oo la dhacsanaa guddoonka Baarlamaanka ee uu hormuudka u yahay Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari iyo musharraxnimada Shiikh Shariif Shiikh Axmed.
Furitaankii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Dr. Ismaaciil Booli-moog oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha munaasabadda, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay munaasabadda iyo sababtii ay u qabteen.
Wuxuu sheegay in munaasabadda ay ku saabsan tahay labo arrimood oo kala ah soo dhaweynta guddoonka baarlamaanka iyo taageerada musharraxnimada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya, wuxuuna intaas ku daray in dadka Soomaaliyeed meel ay dunida ka joogaanba ay garanayaan qofkii wax u qabtay iyo qofkii aan waxba u qaban ee dhibaatada ku soo kordhiyay.
Intaas kaddib wuxuu talo siiyay Umadda Soomaaliyeed oo uu kula taliyay in aysan dib ugu noqon dhibaatadii ay soo mareen iyo Baarlamaanka Soomaaliya oo uu kula taliyay in ay ku mintidaan in ay naga daadan waxa wanaagsan oo ay soo qabatay dowladdii madaxweynaha ahaa Shiikh Shariif, ayna soo doortaan hoggaamiye sax ah.
Sidoo kale waxaa munaasabadda qadka taleefoonka uga soo qeybgalay Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo ka mid ah musharraxiinta madaxweynenimada Soomaaliya, wuxuuna u mahadceliyay dadkii isugu yimid in ay taageeraan musharraxnimadiisa, wuxuuna sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in mar kale loo doorto xilka madaxweynenimada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sidoo kale qadka soo galay, isla markaana la hadlay dadkii munaasabadda isugu yimid, wuxuuna uga mahadceliyay taageerada ay muujiyeen, wuxuuna intaas ku daray in shacabka Soomaaliyeed meel ay caalamka ka joogaanba ay u dabaal degayaan isbedellada ka dhacaya dalka Soomaaliya oo muddo dheer dhibaato ku soo jiray.
Guddoomiye Jawaari waxaa uu intaas ku daray in ay Allaah ka baryayaan in uu ku guuleeyo xilka cusub ee loo doortay, wuxuuna xusay in isbedellada weyn ee dalka dhacay ay ka mid yihiin in baarlamaan la soo xulay, guddoonkiisii dalka lagu doortay, 25 musharrax la soo xulay, 10-ka bishana la dooran doona madaxweynaha dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Intii ay munaasabadda socotay ayaa waxaa qadka taleefoonka uga qeybgalay Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo bogaadisay dadka Soomaaliyeed ee isugu yimid taageerada guddoonka Baarlamaanka iyo musharraxnimada Madaxweyne Shariif. Dad aad u faro badan oo ka kala yimid magaalooyin ka tirsan dalka Sweden ayaa munaasabadda ka hadlay, waxayna dhammaantood ka sinnaayeen u hambalyeynta guddoonka baarlamaanka iyo taageeridda musharraxnimada Shariif Shiikh Axmed. Ugu dambeyntiina, Munaasabaddan ayaa ku soo beegantay iyadoo maalin kaliya ay ka harsan tahay maalinta loo ballansan yahay in codbixin lagu kala saaro 25 musharrax oo isu soo taagay tartanka madaxweynenimada Soomaaliya.
Salaad Xiis Hiiraan Online